Shiinaha 2626-2 Wershada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dabakha Wasakhaysan iyo Alaab-qeybiyeyaasha | Missadola
Nambarka Moodeelka: N95 FFP2 MASK
Magaca waxsoosaarka: N95 waji daboolida wajiga
Cabbirka: 20 * 8CM
xirmo: 5PCS / BAG, 200BAG / BOX, 1000PCS / CTN
Moodel KN95 (2626-1)
Hab xidhashada Dhegaha
Waxyaabaha Polyester, Korantada Static Meltblown
Iyadoo leh Valve Maya
N N qalabka neefsashada N95 waa qalabka neefsashada ee walxaha miir-siiya oo leh hufnaan soo-saare> = 95%. Qalabka neefsashada ee fidsan ayaa siiya ilaalin la isku halleyn karo oo wax ku ool ah kana hortaga walxaha qulqulaya oo aad u yar oo aan is arki karin isha qaawan. Muuqaalka gaarka ah ee maaskarada waa qaabkeeda cusub ee seddexda qaybood leh. Taas macnaheedu waa in aagga garka ee maaskaro iyo sidoo kale qaybta sare (oo ay ku jiraan buundada sanka) laalaabto kahor isticmaalka. Tani kaliya maahan waxay sahlaysaa rarka iyo keydinta qalabka neefsashada, laakiin waxay kaloo kordhisaa xirashada raaxada. Sababtoo ah naqshadeyntaan cusub, maaskarada waxay sifiican ula jaan qaadeysaa qaabka wajigaaga waxayna sidoo kale hubineysaa qabasho aamin ah inta lagu guda jiro dhaqdhaqaaqa wajiga.
Intaa waxaa sii dheer, qaabeynta gaarka ah ee sanka sanka ayaa sii wadaya inay u oggolaato goob wanaagsan oo aragti ah waxayna kordhisaa xirashada raaxada. Dabcan, sanka sanka ayaa waliba ah mid wasakhaysan si markaas aad neefsashada ugu adkeysan karto agagaarka sanka. Intaa waxaa sii dheer, maaskaroku waxay leedahay xargaha madaxa ee xargaha ah. Taas macnaheedu waa N95 waxaa loo gashan karaa si nabdoon xitaa xaddiga madaxa oo kala duwan, maaddaama xargaha madaxa ay la jaan qaadayaan mugga madaxa. Si loo hubiyo in wax khaladaad ah aan lagu dhicin marka la saarayo qalabka neefsashada N95, Buugga tilmaamaha ee Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa lagu soo daray qayb kasta oo baakadaha yar yar ah. Tilmaamahaani kuma koobna oo keliya macluumaad qoraal ah laakiin sidoo kale sawirro muujinaya sida saxda ah ee loo hagaajiyo qalabka neefsashada.
Hore: 2626-1 Mashiinka Wasakhaysan ee Fadhiga Lagu Faan Karo
Xiga: 2626-4 Mashiinka Maskaxda Wejiga 3-Lakabka ah oo Tayo Sare Leh